मर्कूस १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली निआस नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शिलुबा शोना श्वा सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
१ येशू ख्रीष्टबारे* सुसमाचारको आरम्भ: २ भविष्यवक्ता यशैयाले यस्तो लेखेका थिए: “(हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि-अघि पठाउँदैछु र तिनले तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन्‌।) ३ सुन! उजाडस्थानमा कोही कराइरहेछ, ‘हे मानिसहरू हो, यहोवाको बाटो तयार पार, उहाँको मार्ग सोझो बनाओ।’ ” ४ यसैअनुसार, बप्तिस्मा* गराउने यूहन्ना उजाडस्थानमा देखा परे अनि तिनले मानिसहरूलाई आफ्ना पापको पश्‍चात्ताप गरेर क्षमा माग्न र त्यसको प्रतीकस्वरूप बप्तिस्मा गर्न प्रचार गरे। ५ त्यसैले यहूदियाका सबै इलाकाका र यरूशलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनीकहाँ आउँथे र उनीहरूले आ-आफ्ना पापहरू खुलेआम स्वीकार्थे र तिनले यर्दन नदीमा उनीहरूको बप्तिस्मा गराउँथे। ६ यूहन्ना उँटको रौंबाट बनेको लुगा लगाउँथे, कम्मरमा छालाको पटुका कस्थे अनि सलह र वन-मह खान्थे। ७ अनि तिनी यसो भन्दै प्रचार गर्थे: “मपछि मभन्दा शक्तिशाली एक जना आउँदै हुनुहुन्छ; म निहुरिएर उहाँको जुत्ताको फित्ता फुकाल्न लायकको समेत छैन। ८ मैले पानीले तिमीहरूको बप्तिस्मा गराएँ तर उहाँले पवित्र शक्तिले* तिमीहरूको बप्तिस्मा गराउनुहुनेछ।” ९ ती दिनहरूमा गालीलको नासरतबाट येशू आउनुभयो र यूहन्नाबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा गर्नुभयो। १० अनि पानीमाथि निस्कने बित्तिकै उहाँले आकाश उघ्रँदै गरेको र पवित्र शक्तिलाई ढुकुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लंदै गरेको देख्नुभयो। ११ अनि आकाशबाट यसो भन्ने आवाज आयो: “तिमी मेरो प्यारो छोरा हौ। तिमीसित म अति प्रसन्न छु।” १२ अनि तुरुन्तै परमेश्वरको शक्तिले उहाँलाई उजाडस्थानमा जान उत्प्रेरित गऱ्यो। १३ उहाँले उजाडस्थानमा चालीस दिन बिताउनुभयो, जहाँ सैतानले लोभ देखाएर उहाँको परीक्षा गर्ने कोसिस गऱ्यो। त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू पनि थिए तर स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा-सुसार गर्थे। १४ यूहन्ना गिरफ्तार भइसकेपछि, येशू गालीलमा गएर यसो भन्दै परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्नुभयो: १५ “तोकिएको समय आइपुगेको छ र परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। हे मानिसहरू हो, पश्‍चात्ताप गर अनि सुसमाचारमा विश्वास गर।” १६ गालीलको समुद्रको* छेउमा हिंड्दै गर्दा उहाँले सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियासलाई समुद्रमा जाल हान्दै गरेका देख्नुभयो किनभने तिनीहरू जलारी थिए। १७ त्यसैले येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जलारी बनाउनेछु।” १८ अनि उत्तिखेरै तिनीहरूले आफ्ना जालहरू छोडे र उहाँको पछि लागे। १९ अनि अलि पर पुगेपछि उहाँले याकूब र तिनका भाइ यूहन्नालाई देख्नुभयो, जो जब्दीका छोराहरू थिए। तिनीहरू डुङ्गामा बसेर आफ्नो जाल तुन्दैथिए। २० तत्कालै उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो। अनि आफ्नो बुबा जब्दीलाई ज्यालादारी कामदारहरूसित डुङ्गामै छोडेर तिनीहरू पनि उहाँको पछि लागे। २१ अनि तिनीहरू उहाँसँगै कफर्नहुम गए। विश्राम-दिन * हुने बित्तिकै उहाँ सभाघरभित्र * पस्नुभयो र सिकाउन थाल्नुभयो। २२ अनि उहाँको सिकाउने तरिका देखेर तिनीहरू छक्क परे, किनकि उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अख्तियार पाएको व्यक्तिले जस्तो गरी सिकाइरहनुभएको थियो। २३ साथै, दुष्ट स्वर्गदूतको वशमा परेको एक जना मानिस पनि त्यस बेला तिनीहरूको सभाघरमा थियो अनि उसले चिच्याउँदै २४ यसो भन्यो: “ए नासरी येशू, तपाईंको हामीसित के सरोकार?* के तपाईं हामीलाई नाश गर्न आउनुभएको हो? तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ, मलाई थाह छ। तपाईं परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ।” २५ तर येशूले त्यसलाई हप्काउँदै भन्नुभयो: “चूप लाग् र ऊबाट बाहिर निस्केर आइज!” २६ अनि दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई अँठ्यायो र चर्को स्वरमा चिच्याउँदै ऊबाट बाहिर निस्क्यो। २७ तब मानिसहरू असाध्यै छक्क परेर आपसमा यसो भन्दै कुरा गर्न लागे: “यो के हो? नयाँ शिक्षा! उहाँले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई समेत अख्तियार पाएको व्यक्तिले जस्तो आदेश दिनुहुन्छ र तिनीहरू उहाँले भनेको मान्दा रहेछन्‌।” २८ यसैले उहाँको कीर्ति गालील वरपर सबैतिर तुरुन्तै फैलियो। २९ अनि उत्तिखेरै उहाँहरू सभाघरबाट बाहिर निस्कनुभयो अनि याकूब र यूहन्नासित सिमोन र अन्द्रियासको घर जानुभयो। ३० सिमोनकी सासू निस्लोट ज्वरोले थलिएकी थिइन्‌ र तिनीहरूले उहाँलाई तिनको विषयमा तुरुन्त खबर गरे। ३१ अनि नजिक गई तिनको हात समातेर उहाँले उठाउनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोड्यो अनि तिनी उहाँहरूको लागि खाना तयार गर्न लागिन्‌। ३२ अनि साँझ, घाम डुबिसकेपछि मानिसहरूले बिरामीहरू र दुष्ट स्वर्गदूतहरूले बास गरेकाहरू सबैलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ३३ पूरै सहर उहाँको ढोकामै भेला भएको थियो। ३४ त्यसैले उहाँले विभिन्न किसिमका रोगले सताइएका धेरै मानिसलाई निको पार्नुभयो अनि थुप्रै दुष्ट स्वर्गदूतलाई धपाउनुभयो। तर उहाँले ती दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई बोल्न दिनुहुन्नथ्यो किनभने तिनीहरूलाई उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी थाह थियो। ३५ अनि एकाबिहान झिसमिसेमै उहाँ उठ्नुभयो र बाहिर निस्केर सुनसान ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। ३६ तर सिमोन र तिनीसँग भएकाहरूले उहाँलाई धुइँधुइँती खोजे ३७ र उहाँलाई भेट्टाए अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने: “सबै जना तपाईंलाई खोज्दैछन्‌।” ३८ तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “हामी अन्त कतै नजिकैको सानो सहरमा जाऔं, ताकि मैले त्यहाँ पनि प्रचार गर्न सकूँ, किनकि म यसैको लागि आएको हुँ।” ३९ अनि उहाँ तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँदै सारा गालीलभरि हिंड्नुभयो। ४० त्यहाँ एक जना कुष्ठरोगी पनि आयो र उसले घुँडै टेकेर बिन्ती गर्दै भन्यो: “यदि तपाईंसित इच्छा मात्र छ भने पनि मलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ।” ४१ यो सुनेर उहाँ टिठाउनुभयो अनि आफ्नो हात पसारेर उसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो: “मसित इच्छा छ। तिमी शुद्ध भइजाऊ।” ४२ अनि तुरुन्तै उसको कुष्ठरोग हरायो र ऊ शुद्ध भयो। ४३ साथै, उहाँले उसलाई कडा आदेश दिनुभयो र त्यहाँबाट तुरुन्तै पठाउँदै ४४ यसो भन्नुभयो: “यसबारे कसैलाई केही नभन तर गएर पुजारीलाई देखाऊ अनि आफू शुद्ध भएँ भनी तिनीहरूलाई साक्षी दिन मोशाको निर्देशनबमोजिम भेटी चढाऊ।” ४५ तर त्यहाँबाट गएपछि त्यस मानिसले यसबारे जताततै कुरा गरेर चारैतिर फैलाउन थाल्यो। यसले गर्दा येशू सहरमा खुलेआम पस्न सक्नुभएन, त्यसैले उहाँ सहरबाहिर एकलास ठाउँहरूमा बस्न थाल्नुभयो। तर चारैतिरबाट तिनीहरू उहाँकहाँ आउन छोडेनन्‌।
^ मर्कू १:१ * मत्ती १:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १:४ * मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १:८ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १:१६ * मत्ती ४:१८ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १:२१ * मत्ती १२:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १:२१ * प्रार्थना गर्न र धर्मशास्त्र पढ्न यहूदीहरू भेला हुने ठाउँ।
^ मर्कू १:२४ * मत्ती ८:२९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।